JUNE&MAY: January 2009
တို့အမျိုးသား မှာညီတစ်ယောက် နဲ့ ညီမတစ်ယောက် ရှိတယ်။အကုန် အိမ်ထောင်နဲ့ ပဲ။ညီမှာ ၂နှစ်အရွယ်
သားလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ညီမက ပြီးခဲ့ တဲ့ အပတ် စနေနေ့ က သားလေးပဲမွေးတယ်။တို့ဘက် မှာက
တို့တစ်ယောက် ပဲအိမ်ထောင်ကျသေးတယ်။ညီရဲ့ သားလေးမွေးတုန်း က ဆွေမျိုးတွေက ပြောကြတယ်
လူချောလေး(ရုပ်ချောတယ်ပေါ့)။အခု ယောင်းမ ကသားလေးမွေးတော့ မနေ့ က တို့ကဖုံးဆက်ပြီးသတင်း
မေးတယ။်ယောက္ခမ(အမ)နဲ့ဖုံးပြောဖြစ်ပြီး"မားမား ကလေးက ဘယ်လိုနေလဲ"မေးတော့ ကလေးကအ
ရမ်းချောတာပဲတဲ့။အဲဒါဆို သမီးရဲ့ သားလေး တစ်ယောက်ပဲ ရုပ်ဆိုးတာပေါ့ လို့ တို့က ပြန်ပြီးမေးတော့
နင့်သားက ဒေါင်းမျိုး တဲ့။ဒေါင်းမျိုးဆို တာကြီးမှချောလာတာလို့ဆို ချင်တာ။တို့သားလေး မွေးတုန်းက
တို့သားလေးက မွေးတုန်းက ရုပ်ဆိုးတာကိုး။ဒီမှာ ကြည့်လေ။
တို့ယောက္ခမ တစ်လနေပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်တော့
တို့ က သာလေးဓာတ်ပုံ ထည့်ပေး လိုက်တယ်။အမျိုး
နှစ်ဖက်စလုံးက အသိမိတ်ဆွေ တွေကိုတောင်မပြပဲ
တို့အမေကလည်း"ကလေးက မျက်နှာ ပြဲပြဲ နဲ့ ဘယ်လိုရုပ်လေးလဲမသိဘူးတဲ့"လေ။ပြောရက်လိုက်တာ နော်။
နောက်တဖြည်းဖြည်း ၄လ၊၅လ အရွယ် ရောက်တော့မွေးစကလောက် ရုပ်မဆိုးတော့။အဲဒီ့တော့တို့မှာမြန်မာ
ပြန်တဲ့လူကြုံ ရှိတိုင်း သားလေးကိုရိုက်ထား တဲ့ပုံတွေ ထဲကနေ အကောင်းဆုံးပုံ ၇ ပုံ၊၈ ပုံလောက် ရွေး။အဲဒါ
နဲ့ မကျေနပ်သေးပဲ အိမ်မှာအတူနေ တဲ့ အမတစ်ယောက် ကို ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရွေးစင် ပုံတွေထဲ ကဘယ်ပုံက
အကောင်းဆုံးလဲ ရွေးခိုင်း။ပြီးတော့ အဲဒီ့ အကောင်းဆုံးပုံ ကိုအပေါ်ဆုံး မှာထားပြီး ပို့တယ်။(ရူးတာလေ)။
သားလေးပုံ ကိုအားတိုင်း ရိုက် ထားတာ ပုံ ၁၂၃၂ ပုံတောင်ရှိတယ်။
ဖုံးဆက် တိုင်းလည်း "မားမားရေ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တယ်ပဲ ပြောပြော သမီးသားလေးက ချောလာတယ်
လို့ "ကိုယ့်မှာမမောနိုင် မပမ်းနိုင် ပြောရတယ်။အဲဒီ့တော့ တို့ကို "သူ့သား ချောတယ် ချောတယ်နဲ့ ရူးနေတာ
တဲ့"။ဘယ်သူတွေ ကကိုယ့်သား ဘယ်လိုရုပ်ဆိုး တယ်ပြောပြော တို့မျက်လုံးထဲ မှာသားလေးဟာ ချောမှချော။
ချစ်ဖို့ကောင်း မှ ကောင်း။
Posted by JuneOne at 7:47 PM 12 comments Links to this post
Posted by JuneOne at 3:20 PM 8 comments Links to this post
တို့ရဲ့ အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲ ကဒီသူငယ်ချင်းလေးက တို့နဲ့ စိတ်ကောက်ဖော် စိတ်ကောက်ဖက်အကြိမ်
အများဆုံး သူငယ်ချင်းလေး။စိတ်ရင်းကောင်းတယ်။စိတ်တိုတယ်။မြန်မာပြည် မှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တက်နေ
တုန်းကလည်း အဆောင်မှာ အခန်းချင်းကပ်ရက်၊ထမင်းလည်းတူတူချက်စား၊ဈေးသွားလည်းတူတူ၊ဈေးထဲ မှာ
၅ကျပ်ပဲ ပေးရတဲ့ ရွှေရင်အေး ကို ဈေးသွားတိုင်းအမြဲသောက်တာ တွေက တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာ။စင်ကာပူ
ရောက်တော့လည်း သူက ကိုယ့်အရင်ရောက် နေတော့ ကိုယ်ကျောင်းအဆောင်နေ ချင်တယ်ဆိုလို့ ကို့ကိုယ်
ကူညီပေးတယ်။သူ စာမေးပွဲဖြေခါနီး မှာတောင် ကိုယ့်ကို အဆောင်လိုက်ပြောင်းပေးတယ်။NTU မှာ အဆောင်
နေတော့ သူနဲ့ကိုယ်က အပေါ်ထပ် အောက်ထပ်။ဘာမဆို ကိုယ်အကူညီ လိုရင်သူပေးနေကြ။မိန်းမလဲ ပီသတယ်
တို့လို ရှပ်တေးမ မဟုတ်။အ၀တ်အစား ဆိုလဲ သူကိုယ်တိုင် ချူပ်တက် ပြုတတ်။ကိုယ့်သားလေး အတွက်တောင်
ချူပ်ပေးသေးတယ်။သူလား ကျောင်းတုန်းက ကွင်းနော်။ကိုယ် နဲ့ သူ ခင်မင် မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ကိုယ်နဲ့
သူ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ခေါ် လိုက်ပဲ။ သူအရင် ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်ရပြီး အဆောင်ကနေထွက်ပြီးအပြင်
မှာ တို့ရဲ့ အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပဲBedok မှာအိမ်ငှားနေ တော့ ကိုယ့်မှာ NTU ကနေ အဲဒီ. ကိုသွား
သွားလည်ရတယ်။အဲဒီ့ညဆိုရင်သူနဲ့ကိုယ် ဂျပန်သူရဲကားကြည့်တယ်။မှတ်မိသေးတယ် ဂျပန်ကားတစ်ကား
ဂျပန်အိမ်ရှင်(လူလွတ်) ကအိမ်ဖော်မလေးကိုကြိုက် တယ်။အိမ်ဖော်မလေးက လည်းကြိုက်တယ်။ဒါပေမယ့်
အိမ်ရှင်ရဲ့အဒေါ်က သဘောမတူဘူး။ အိမ်ဖော်မလေး ကလည်းအဆင့်အတန်းမတူလို့ ရှေ့ဆက်မတိုးချင်ဘူး။
ဒါပေမယ့်အိမ်ရှင်ကဇွတ်။နောက်ဆုံးအိမ်ဖော်မလေးက ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး အိမ်ရှင်ရဲ့ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်တဲ့
ပန်းကန်ကြီးကို မတော်တဆ လိုလို နဲ့ ကျခွဲပစ်လိုက်တယ်။အဲဒိ ဂျပန်မိသားစု မှာသူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းအရ ဘိုးဘွား
စဉ်ဆက်ပိုင်တဲ့ပန်းကန်ကြီးကို ကွဲအောင်လုပ်တဲ့သူကို အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဓားနဲ့လည်ပင်းကို တိခနဲ့နေအောင်
ပိုင်းသတ်ရတယ်။အိမ်ရှင်က အိမ်ဖော်မလေး ကို ဓားနဲ့လည်ပင်းပိုင်းတာ တို့မျာမကြည့်ရဲ လို့ မျက်လုံးကိုလက်
နဲ့ အုပ်ထားရတယ်။ဇတ်လမ်း ကအဲဒီလို နဲ့ အိမ်ဖော်မလေးသရဲ ဖြစ်သွားတာပါ။သူက ကြည့်ရဲ တယ်။သူရဲကား
နောက်ပြီးကျောင်းတက်နေစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး တို့ရဲ့ hair ဒီဇိုင်နာပေါ့။တို့ ကိုအမြဲဆံပင်ညှပ်ပေးတယ်။
ပုံစံလား .........................ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်ခေါင်းညောင်းတယ် ၁နာရီလောက် ကြာအောင်ညှပ်လို့။:D
ပထမဦးဆုံး နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆံပင်ဆေးဆိုးဖူးတယ်။သူလုပ်ပေးတာ မနက်၆ နာရီသာထိုးသွားတယ် ဆံပင်
ကနီမလာဘူး။Revlon ကိုဆိုးတာ။သူက စောင့်ကြည့်ပါဦး ၁ရက် ၂ရက် ဆိုလို့ စောင့်လိုက်တာ အခုထိပဲ ၂နှစ်ရှိ
ပြီ ဘာရောင်မှမထွက်။အဲလို ဆံပင်ဆေးဆိုးရာမှာ တော်သူ။:D
တို့ကျောင်းပြီးလို့ တို့ အမျိုးသားနဲ့ တစ်အိုးတစ်အိမ် ထူထောင်တော့ အရောက်အပေါက် နည်းသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသား ခရီးသွား ရင်သူ့အိမ် သွားစမြဲ။အရင် ကလောက်တော့ သူတို့ နဲ့ သွားအတူ လာအတူမလုပ်
နိုင်တော့။သားလေးကို မွေးပြီး တော့ ပိုဆိးုတယ်။တစ်လ ကို ဖုန်း၂ခါလောက် ပဲဆက်ဖြစ်တယ်။တွေ့ဖို့ ဆိုတာ
သူလာတွေ့မှ။ဒီတစ်ခေါက် ဘလော့ စလုပ်ထဲက ဖုန်းမဆက်မိတာ ဒီနေ့အထိ။စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုနေ့ဖုန်းခေါ်မယ်၊
ဒီနေ့ဖုန်းခေါ် မယ်နဲ့လွန်လာလိုက်တာအခုထိပဲ။ဒီနေ့ Gtalk ပေါ်မှာတွေ့တော့ တို့က ၀မ်းသာအားရနဲ့Hiလုပ်တော့
Hi ပြန်လုပ်ပြီး ပြောတယ် တို့ကဖုန်းမခေါ် လို့ ၀မ်းနည်း နေတယ်တဲ့။ပြီးတော့ တို့ကို ဆက်ပြီး ရစ်တော့တာပဲ။
သူကပြောဖူးတယ် သူနဲ့ တို့ က ဘ၀ခြားနေပြီတဲ့။ကိုယ် အိမ်ထောင်ပြုတာကို ဆိုလိုတာ။တစ်ဖက်သောင်ထွန်း
တစ်ဖက်ကမ်းပြိုဆို သလိုမျိုးပေါ့။အိမ်ထောင့်တာဝန် ထမ်းနေရတော့ သူငယ်ချင်းတာဝန် လစ်ဟင်းတာတော့
အမှန်ပဲ။ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးပါနော်။"သူငယ်ချင်းလေး ခင်တယ် ကိုယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ..........................
ကိုယ်ဒီလို သိပ်သိပ် ရှုပ်နေတယ်။"
Posted by JuneOne at 5:51 PM4comments Links to this post
Posted by JuneOne at 9:20 PM 17 comments Links to this post
ဒီနေ့ဆိုရင် juneone လေး ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ ၁လတိတိ ရှိပါပြီ။မွေဖွားပေးလာသူကတော့ သားလေးအမေ တို့ပေါ့။
တို့ကို အိမ်မှာ ကြမ်းလွန်လွန်းလို့ ဂျမ်းပုံ လို့ခေါ်တယ်။ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေက ကျော့ တဲ့။ ငယ်တဲ့ သူတွေ
က မကျော့ တဲ့။တို့ဟိုတစ်ယောက်က အာဖျံ တဲ့။blog ပေါ်မှာတော့ juneone ပါ။တို့ရဲ့ ကိုကို မှာဟိုးအရင်တုန်း
ahphyulay ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘလော့ပေါက်စလေးတခု စမ်းလုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲဒိ မှာတူလေးတစ်ယောက်
ပုံတင်ထားတယ်။အခုတို့မှာသားလေးဓာတ်ပုံတွေ ရှိတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ တင်ချင်လာတယ်။ဒါနဲ့ သူ့ဘလော့
ထဲ long in ၀င်ပြီး သားလေးပုံတင်မယ်လုပ်တော့မတင်တတ်ဘူးရယ်(ညံ့တာပြောပါတယ်)။ကွန်ပြူတာ လေး
ကိုမပြီး ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဂိမ်းဆော့နေ တဲ့ ဆရာကြီး သူ့ဆီ သွားပြီး "အာဖျံ့ကို သာလေးပုံ ဘယ်လို တင်ရမလဲ
ပြောပြပါ"လို့ပြောတော့ ဂိမ်းဆော့ နေတာ ပျက်မှာစိုးလို့ လှည့်တောင် မကြည့်။ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်မေးတော့
မှ ဘလော့ထဲဝင် ဟိုလုပ် ဒီလုပ် လုပ်ပြီး ၊သူမေ့သွားပြီ ကိုယ့်ဘာသာအသစ် လုပ်လိုက်တဲ့။ဟင့်.မယူခင်ကနဲ့
များ ကွာလိုက်တာ။အခုတော့ ကိုယ့်ကို ဂိမ်းလောက်မှ မချစ်ခင်တော့ဘူး။
တို့မှာ ကွန်ပြူတာ လေး ကိုအခန်းထဲ ပြန်သယ်လာပြီး ဂူဂဲ ကနေ အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီး juneone ဆိုတဲ့
ဘလောလေး ကိုမွေးဖွားလိုက်တယ်။ပထမ ဦးဆုံး သားလေးပုံတင်ပြီးဖွင့်ပွဲ လုပ်တယ်။အမှတ်တရHappy
New Year ကို စရေးတော့ အရေးအသားမပြေပြစ်ဘူးလို့ တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ဟုတ်တယ် တို့လည်း
သူများဘလော့ကစာတွေဖတ်တာ လျောခနဲ လျောခနဲပဲ။
မြင်းမိုရ်ဦး၊မ၀ါ၊မခင်ဦးမေ၊နားခိုရာ၊နဗန၊ဒီဂိုလာ၊မမွန်၊၀-way၊ (အခု May&June ပေါ့)၊မနုစံကနေအခုဆိုရင်
ရှိသမျှတော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအားကျလို့ ကိုယ်လဲရေးလိုက်တာ။ကိုယ့်စာကိုယ်ပြန်ဖတ်
တော့ ထောင့်နေတယ်။အရသာမရှိတဲ့ ဟင်းလိုပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့။ကိုယ့်ဘလော့လေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်။
ဟိုဟာထည့်ချင်၊ဒီဟာထည့်ချင်။html ကုတ်တွေ ကို လိုက်ဖတ် ဟိုဟာကလိ၊ဒီဟာ ကလိ တော်တော်အချိန်
ကုန်သည်။ကောင်းတာကောင်း ပျက်တာပျက်။မ၀ါ ဆီမှာ slideshow တင်ထားတော့ ကိုယ်လည်း သာလေး
ရဲ့ပုံလေးတွေ ကို slide show လုပ်ချင်လို့ အင်တာနက်မှာ ကုတ်တွေရှာပြီးဖတ်လိုက်ရတာ မောမှမောပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ် ကျော့ နင့်ကို ကလေးတဖက်နဲ့ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်မယ်ထင်တာ ဘလော့
တောင် လုပ်နိုင်သေးတယ်။တော်တော်အားနေလားတဲ.။ သားလေးအိပ် တာနဲ့ပြေးပြီး ဟင်းချက်၊အိမ်ရှင်း၊
သားနိုးလာရင် နို့တိုက်၊ထမင်းကျွေး၊သူဆော့နေရင် ကိုယ်လည်း ဘလော့လေ။ညနေ ယောက်ျားပြန်လာ
ရင် ဟင်းနွေး၊ထမင်းကျွေး ပြီးသားလေးကို သိပ်။ပြီးတော့ မီးပူတိုက်၊ဘလော.လည်ပြီးအိပ်။မနက် ကို ၆
နာရီထ ယောက်ျား အလုပ်သွားပြီးလို.သားလေးအတွက် ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးရင် ဘလော့စလည်တယ်။
2 Jan 09 မှာ မမkom နဲ့ မစင်းဒန်လာတို့လာလည်တာစီးဘုံးမှာနှုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ တော့ပျော်လိုက်တာ။
အဲဒိနောက် မမွန်၊မ၀ါ၊မနုစံ၊မမေမိုး၊july dream၊မမီယာ၊ကိုဇနိ၊မဇနိလာလည်တာတွေ့တော့မျောက်မီးခဲကိုင်မိ
ပါသည်။ဟီး.ကိုယ်လည်း အရင်ဘလော့လည်တုန်းက ဖတ်ပြီးပြန်ပဲလုပ်ခဲ့တာလေ။ဘလော့စလုပ်ကတည်း က
အမြဲလာလည်သော သူငယ်ချင်းများကိုလည်းကျေးဇူးပါ။အရသာသိပ်မရှိသော တို့ရဲ့ဘလော့လေးကို လာလည်
ကြတာကိုကျေးဇူးတင် သောအားဖြင့် weshemeထဲကအတိုင်းနည်းယူချက်ထားတဲ့ ငါးသရက်သီးငပိချက်၊
ရှောက်သီးသုပ် နဲ့ ဘူးသီးဟင်းခါး ကိုသုံးဆောင်သွားကြပါနော်။
Posted by JuneOne at 12:29 PM9comments Links to this post
Posted by JuneOne at 4:47 PM 1 comments Links to this post
တနေ့ က အမျိုးဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်နှင့် ဖုန်းတော့သည်။ဘာညာ ကွိကွ ပြောပြီးသည့်
သကာလ သူကမေးသည် "၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မည်ဆို"တဲ့ "ဟင် မကြားမိပါလား" ကိုယ်ကဆိုတော့
သူ့အမျိုးသားရုံး တွင် ပြောနေကြသည်တဲ့။ကိုယ့် မှာလောကကြီးနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပါလား။
၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မည်ဆိုရင် အခုဘာလုပ်ရရင် ကောင်းမလဲ၊နိဗာန် ရောက်ကြောင်းတရားအား
ထုတ်ရမလား။ဒါမှမဟုတ် စုထားတဲ့ ပိုက်ပိုက် တွေ ကို ထုတ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားရမလား။လားးးးးးး
ပေါင်းများစွာတွေးပြီးနောက။် မဖြစ်သေးပါဘူး သေချာအောင်သိရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အင်တာနက် မှာ search
လုပ်လိုက်သည်။တွေ့ပါပြီ Nostradamus ဆိုတဲ့ French astrologer (1503-1566)ရဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းပါ။
၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နေ့ ကWorld Trade Center တိုက်ခိုက်မှုအပြီးသူ့ ရဲ့ ကြိုတင်ဟော စာတမ်းဟာ
ပိုပြီးနာမည် ကြီးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ World Trade Center တိုက်ခိုက်မှုမှာ သူ့ ဟောကိန်း ထဲမှာ ပါ တဲ့
အဆောက် အဦးထဲက အမြင့်၊အလျား၊တည် နေပုံ၊မြို.နံမည် တို့ဟာလည်း quite same လို့ ဆိုပါတယ်။
Nostradamus က သူ.ရဲ့ဟောကိန်းထဲမှာ Mayan Calender ဟာ ၂၀၁၂မှာအဆုံးသတ်မယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
တွက်တွက် conclusion က ဘာလဲ ဘယ်လဲ ပေါ့။21st December 2012 မှာ နေ ဟာ Milky Way နဲ့ plane of
the ecliptic(နေပတ်လမ်း)ရဲ့ ဖြတ်မှတ်မှာပေါင်းဆုံ မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Mayan Calender ကိုဆက်ပြီး
ဒါ.ကြောင့်Nostradamus က Mayan Calender ဟာ ၂၀၁၂မှာအဆုံးသတ်မယ် လို့ ဟောခဲ့တာပါတဲ.။
ကမ္ဘာကြီး အဆုံး သတ် မယ်လို့ မဟောထားပါဘူးလို့ တစ်ချို.က ကောက်ချက်ချပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ ပဲ ကိုယ့်
ရှာဖွေချင်းကို ရပ်တန့် လိုက်တယ်။အဲဒီ.အကြောင်း site တွေကလည်း အများကြီး၊ထင်မြင်ချက် တွေကလည်း
တပုံတခေါင်း။site တော်တော် များများ ဖတ်ပြီးသည့် နောက်တွင် ခေါင်းမှုးသွားသောကြောင့် ကမ္ဘာကြီး အဆုံး
သတ် မယ် ဆိုလည်းသတ် တကမ္ဘာလုံး ဖြစ်မှာဆိုပြီး အအေး သောက်ပြီး အနားယူ အိပ်စက်လိုက်သည်။
စိတ်ဝင်စားလျှင် အောက်ပါ site များတွင်သာမက search လုပ်ပြီးလည်းဖတ်နိုင်ပါသည်။
Nostradamus Predicts A Comet Planet Is Going To Hit Earth In 2010-2012 What Do You Think?
ပုံများ ကို ဒီနေရာနှင့်ဒီနေရာက ယူသည်။
Posted by JuneOne at 9:20 AM2comments Links to this post
Posted by JuneOne at 11:30 PM9comments Links to this post
ဒီနေ့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့"ဒီသီချင်း"ကို နားထောင်တယ်၊ မစန္ဒာရဲ့ "သစ်ပင်ကလေးများ" ကိုဖတ်ပြီးမေးခွန်း
၁ခုကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးမိတယ်" ငယ်စဉ်က ကလေးဘ၀ ကိုပြန်လိုချင်သလား?"
(မစန္ဒာရဲ့ "သစ်ပင်ကလေးများ" SECRED"လုပ်ထားသဖြင့်ကော်ပီကူးမရသောကြောင့် paint ဖြင်.
တင်သည်။သည်းခံပြီးဖတ်ပါရန်။ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် ဒီမှာ လုပ်ပါ။)
မလိုချင်တော့ပါ စာတွေပြန်ကျက်ရမှာ မုန်းလှသည်။
Posted by JuneOne at 3:21 PM7comments Links to this post